बाम गठबन्धनको प्रगती : नाै महिनामा ढल्ने सरकार अव साढे २ वर्षमा ढल्ने, - Muldhar Post
बाम गठबन्धनको प्रगती : नाै महिनामा ढल्ने सरकार अव साढे २ वर्षमा ढल्ने,
मीनबहादुर पण्डित २०७४, ८ पुष शनिबार 387 पटक हेरिएको
पाँच वर्ष एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री होस र स्थिर सरकार बनोस, अनि देशमा सान्ति र विकास होस भनेर बाम गठबंधनलाई भोट हालियो, जिताईयो । तर अहिले त भाग बण्डा र आलोपालो प्रम खाने पो हल्ला छ त ? कुरा के हो ?
यो त जनमतको सरासर अपमान हो ! यसले २ ब्यक्ति र २ पार्टीलाई फाइदा भए पनी मूलुकलाइ भने कुनै फाइदा गर्दैन । देस र जनता सम्पन्न बनाऊँन गठबन्धन गरेको की २ पार्टी संपन्न बनाऊन ? यदि प्रचण्डले यस्तो सर्तमा बाम गठ बन्धन गरेका हुन भने यो त सत्तामा जाने र प्रम बन्नका लागी मात्र गरिएको सम्झौता रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसले प्रचण्ड त्यागी नता होईन सत्ताको लागी जो संग जस्तो संझौता गर्न पनि पछी नपर्ने नेता मात्र हुन भन्ने प्रमाणित गर्न सकिन्छ । यो जनमतको भावना र आसए बिपरीत भयो ।
जो सक्षम छ जसलाइ जनताले प्रधानमन्त्री बन भन्छ उसैलाइ बनाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्ड भारत ज़ादा गरिएका संझौताका प्राय ज़सो सबै बुदाहरू विवादित बनेको थियो, त्यसैले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागी योग्य ब्यक्ति हुदै होईंनन । ५ बर्ष ओलीले नै देश चलाऊन पाउन । उनलाइ भाग बण्डा गर्न बाध्य नपारियोस । बरू प्रचण्डलाई पार्टी अद्यक्ष वा रास्ट्रपति दीनु, तर प्रधानमन्त्री पद भाग बण्डा गर्नु पट्टकै सुहाउदैन । त्यसैले एदी साढे २ बर्समा आलो पालो गर्ने गरी समझदारी गरिएको भए त्यों गलत भयों ।
यो कुरा चुनाव अघि जनतालाइ किन भनिएन ? यो कुरा गोप्य राख्नुको चित्त बुझदो जवाफ जनतालाई दिनै पर्छ । जनताको नज़रमा बाम गठबन्धनको आसय एउटै सरकार ५ वर्ष भन्ने बूझींछ । तर साढ़े २ बर्षको आलो पालो एउटै सरकार ५ बर्ष भन्ने होईन । मावोबादी र एमाले पार्टी एकीकरण नै गरे पनी संसारको क़ुन देशमा छ एउटै पार्टीका २ ब्यक्ति आलो पालो गरेर प्रधानमन्त्रि हुने चलन ?
यो क़स्तो प्रजातांत्रिक अभ्यास हो ? जनताले बहुमत दिदा पनी स्थिर सरकार चलाऊन नसक्ने वा नचाहने हो भने यो चुनाव पनी सिंडिकेटलाई संस्थागत गर्ने माध्यम मात्र हुनेछ । यो त कांग्रेस सकिए झै वामपन्थीहरूको पनी सकिने बाटो मात्र हो । संसारका क़ुन देसक़ा पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्दा प्रधानमन्त्री पद भाग बंडा लगाउछन ? यसको जवाफ दिन सक्ने कोहि छ ?
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन
कम्युनिस्टको सामान्त अवतार
२२ वर्षपछि द्वन्द्वमा हराएका
ओलीको तपस्या र नेपालको
लोकतन्त्र स‌ंकटमै परेको हो
ओली- देउवा र राणाको